DAANDII BOSONTU INTERVIEW WITH ABDUL WAQO BORU (King Sama) - Borana Daughter Bonus
Qabsoon Keenyaa Manii gahuuf jalqabe ifatti lafa kaahate sanatti iggitii gochuuf of qindeessuu barbaachisa! Caalaa Hayiluu, Waxabajjii 3, 2020 Qabsoon manii hin kaayanne galma gahus kan...
Amsaaluu Maayessaatiin | Gurraandhala 27, 2020
Afaan saba tokkoo guddateera kan jedhamu yoo afaan hojii (working language), Afaan Barnootaa (Saayinsii fi Teeknoolojii) ta’e fi Afaan Daldalaa (Language of Business) akkasumas bakka maratti guyyaa guyyaatti ittiin fayyadame dha. Egaa Afaan Oromoo Magaalaalee Oromiyaa keessatti baayyee yeroo dubbatamu hin mul’atu. Namootni harki caalaan Afaan Amaariffaa kan dubbataniif (Magaalaa gurguddaa Oromiyaan qabdu keessatti), Afaan Oromoo dubbachuuf fedhii waan hin qabneef yookaan immoo tasumaa dubbachuu waan hin dandeenyeefidha. Kun rakkoo ilaalchaa fi jibbiinsa saba sanaaf isaan qaban irraa kan madde dha.
Yeroo afaan Amaariffaa afaan hojii dabalataa haa ta’u jedhu, paartiin dheengadda bixxilame Prosperity Party (armaan booda PP), dantaa fi mirga namoomaa heera mootummaan uummata Oromoof kenname kan mulqudha/cabsudha. Barruun gabaabduun kun wantoota/haalota wal-faallessan lama (two contradicting scenarios) irratti bu’uuffachuun kan dhiyaatedha. Isaanis kan armaan gadiiti.
1. Afaan Oromoo Afaan Hojii Dabalataa Mootummaa Federaala Rippabiliika Itoophiyaa Gochuun Rakkoo Maalii qaba?
Bara 2010 A.L.A Yuunivarsiitii Finfinneetti barataa Seeraa digirii lammaffaa, muummee Seera Mirga Namoomaa (Human Rights Law) hordofaan ture. Gosa barnootaa ‘Mirga Saba Xiqqaa’ (Minority Rights), xiyyeeffannoon ammoo mata-duree barumsa Linguistic Minority kan jedhu irratti ka’e osoon fudhadhuu gaaffiin armaan olitti akka mata dureetti dhiyaate barsiisaa keenyaan ka’e. Deebii barattootni kennaniin egaleen falmii yaadaa ani heeraa fi mirga namoomaa idil-addunyaa Itoophiyaan raggaasifatte bu’ureffachuun dhiyeesse kaaseen kayyoo imaammata Afaanii PP fudhatee achii as ba’e fi balaa inni qabu asumaan ibseen darba.
A) Afaan Oromoo Afaan Hojii Dabalataa kan Mootummaa Federaalaa Itoophiyaa Gochuun Seermaleessa (Unjust)
Hiikkaan unjust jedhu, hiikni irra keessa isaa (literary meaning) hin maluuf kan jedhu ta’a. Deebiin koo, Afaan Amaariffaa gita sirna bittaa Nafxanyaan humnaan kan hojii irra oole malee bifa seeraafi fedhii uummataa fi saba bal’aa biyya Itoophiyaa keessa jiraatu kan giddugala godhate miti. Kanaaf, jechi Afaan Oromoof sadarkaan guddinaa hin maluuf jedhan kun bifa kamiinuu fudhatama hin qabu. Afaan Oromoo ulaagaa Afaan tokko guutu guutee kan irraa hafudha! Gaaffiin uummata Oromoos gaaffii mirgaa, heeraa fi mirga namoomaa bu’uura kan godhatedha malee gaaffii humnaan namarratti fe’uu miti. Gaaffiin Oromoo kun yoomiyyuu taanaan Seera qabeessaafi gaaffii mirgaati. Rakkoo baroota lakkoofsise kan akka Ilaalcha sirna Nafxanyaa fi jibbinsa saba Oromoof qaban malee; Afaan hojii Federaalaa gochuun sirrii miti yaadni jedhu yaada akkasumaanii (unfounded) fi sababaan hin deeggaramne (Not supported by convincing and reasonable facts) dha.
B) Oromootu Wajjira Federaala Keessatti Nurra Galagala (Carraa Hojii keenyaa Cufa)
Yaadni kun ammas bifa kamiinuu sayinsaawaafi amansiisaa miti. Oromoon akka lammii biyya kanaatti hanga afaan hojii beekeetti sadarkaa federaalaatti wajjira kan fedhe keessa seenee hojjechuu danda’a. Garuu, Oromoon guddina Afaan isaa kan inni fedhu, eenyummaa saba biraa irraan dhiibbaa ga’uuf osoo hin taane eenyummaa isaa kunuunfachuufidha. Bu’aa saba biraa fi dantaa warra aangoo irraa jiruu tiksuuf jecha Afaan Oromoo akka afaan hojii mootummaa federaalaa hin taane kan fedhu lakkoofsa hin qabu. Ammas ta’e, yoomillee gaaffiin saba Oromoo bu’uura mirga namoomaan yommuu ilaalamu sirriifi seera qabeessa.
C) Hanqina Leecalloo (Limited Resource)
Galmeewwan Afaan Hojii Mootummaa Federaalaan baarraa’an mara gara Afaan Oromootti hiikuuf (translate) leecalloo waan hin qabneef (gigantic budgetary implications for the federal government) hin danda’amu. Kanaaf, hanqina maallaqaa ykn humna namaa waan jiruuf gaaffiin saba kanaa deebii hin argatu ykn sirrii miti jedhanii bira taruun dogoggora seeraafi seenaati. Afaan Oromoo Afaan federaalaa yoo ta’e kisaaraa isaa malee bu’aa buusu hin qabu jedhee kan yaada isaa dhiyeesses tureera. Qabeenyi Oromiyaan qabduufi galii isheen mootummaa biyya sanaaf gootu tilmaamuun nama hin dhibu. Ammas yaadni kun bishaan hin kaasu. Galmee (Document) Mootummaa Federaalaa kan Afaan Amaariffaan jiran Mootummaan Naannoo Oromiyaa gara Afaan Oromootti hiikuufi Qabeenya fi humna namaa ga’aa qaba. Yaadni waa’ee hanqina baajetaa jedhu kun gonkumaa deebii amansiisaa miti. Akkasumas, gaaffii mirgaa Sabni tokko gaafate bifa kanaan ukkaamsaanii bira taruun hin danda’amu.
D) Tokkummaa Itoophiyaa Laaffisa ykn Diiga/Endangers Ethiopia’s Unity
Falmiin ykn yaadni itti aanu ammoo Itoophiyaa tokkummaafi cimina qabdu ijaaruuf sadarkaa federaalaatti Afaan hojii tokko (Mono-lingual approach) qofa gochuu dha. Kan biraan ammoo naannoleen afaan hojii dabalataa akka qabaatan taasisuudha. Yaanni kum Mootummaan Naannoo Oromiyaa keessatti Amaariffi afaan lammataa (as second language in Oromia region) ta’ee yoo tajaajile tokkummaa Itoophiyaa eeguu keessatti shoora olaanaa taphata kan jedhanidha. Amaariffa garuu sadarkaa Federaalaattii akka Afaan hojii tokko qofa ta’ee tajaajila itti fufu cimsee dubbata. Kun ammo yaada barsiisaa keenyaa ture. Qomoon Amaara, Holotaatti dhalatee guddate, garuu Afaan Oromoo gurra yoo kutte hin dhaga’u! Isa akkasiin maal jettaree egaa? Waaqaafi Haqaaf dhiifta malee! Garuu, biyyicha tokkummeessuuf dimokiraasii sirrii lafa qabsiisuufi walqixxummaa Seeraafi dhugaa (formal and substantive equality) sabaafi sablammii biyya sana keessa jiraatu mirkaneessuu qofa. Dabalataanis gartuuleen sirnoota darban irraa fayyadamoo turan; walqixxummaa lammii mara biyya sana keessa jiru fudhachuufi Dimokiraasii dhugaatti amanuu danda’uu qabu. Kanaan ala yaada saayinsaawaa fi amansiisaa hin taaneen biyya ijaaruun ykn tokkummaa isaa eeguun hin danda’amu.
Akka yaada kootti, Afaan Oromoo moggaatti dhiibanii baasuu irra, dabalataan Afaan hojii Mootummaa Federaalaa gochuun tokkummaa Itoophiyaa kan cimsu/utubu malee kan laaffisu ykn ammoo kan diigu miti. Kana gochuun ammoo uummanni Oromoo biyyattii keessatti hammatamummaan (inclusiveness or sense of belongingness) akka itti dhaga’amu kan godhu ta’a. Adeemsa bu’uura Seeraafi Heera biyyattii eegee yoo hojii irra oole, Yaada Paartii Siyaasaan osoo hin taane; Gaafas Oromoon Itoophiyaan biyya kooti, na fakkaachuu eegalteetti jedhee ittiin of waamuu eeagala.
2. Afaan Amaaraa Afaan Hojii Dabalataa sadarkaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Yoo Ta’e Midhaan Isaa Maali (Following Regional Bilingualism Approach)
Balaa Afaan Amaariffaa dabaltaan Afaan hojii Naannolee kana dura hin fayyadamnee godhanii dhiyeessuun miidhaa inni qabu akka armaan gadiitti tuttuquu yaaleera. Xiyyeeffannaan koo Afaan Oromoofi Oromiyaa irratti kan hundaa’e dha.
A) Guddina Afaan Oromoo Quucarsa ykn Dhora (It Arrests The Development of Afan Oromo)
Afaan Oromoo Afaan Hojii Mootummaa (official language) sadarkaa Naannoo Oromiyaatti ta’ee kan tajaajila kennuu eegale umurii waggaa 30 gadii kan qabudha. Kun Heera Mootummaa naannoo Oromiyaan kan ragga’e dha. Namni tokko yoo Afaan sana danda’e malee hojii mootummaatti ramadamee hojjechuu hin danda’u. Sadarkaa tajaajila kennisa haqaatti (Mana Murtii Mootummaa Naannoo Oromiyaatti) namni Afaan hin dandeenye tokko, mirga Afaan dhaga’uufi dubbachuu danda’utti hiiksifachuu (Due Process right) qaba. Kun mirga heera Mootummaan tumamee jirudha.
Erga Afaan Oromoo Umurii hangas ga’u qabaatee (Heeraafi Seeraan Afaan hojii mootummaa erga ta’ee jechuu kooti). Akkamiin Afaan Waggaa dhibbaa fi Shantama Afaan Mootummaa ta’ee tajaajile kana waliin dorgomaa ta’uu danda’a. Akka Fakkeenyaatti Magaalaalee gurguddoo keessatti, sadarkaa dubbiitti jechuu kooti; baayyee dhoramee jira. Gaafa, Amaariffi akka Waarri Bilxiginnaa jedhan kun osoo Afaan dabalataa ta’ee murtaa’ee, hin ta’u malee; yeroo gabaabduu keessatti baayyeen Afaan Oromoo dhiisee Afaan kanaan hojii hojjeta. Kun ammoo guddina Afaan Oromoof baayyee gufuu guddaadha. Har’allee, osoo afaan Oromoo afaan hojii Mootummaa ta’ee jiruu, Waajjiraaleen Mootummmaa Naannoo Oromiyaa, Finfinnee fi Magaalaa gurguddaa tokko tokko keessatti Afaan Oromoodhaan taajaajila abbaa dhimmaaf kennuuf fedhii hin qaban. Waajjira Mootummaa kamiin jira jettee of gaafatta. Yoo Afaan Amaaraa ammoo dabalataan Afaan hojii ta’ee dhufe garamitti akka deemuufi maal akka dhufu tilmaamuun nama waan rakkisu natti hin faakkatu. Magaalaa Oromiyaa Amaariffa malee hin dubbanne keessatti Afaan Oromoo osoo guyyaa tokko hin buliin moggaatti baafama. Adeemsa keessa sadarkaa waajjiraatti illee hojiirra oolmaansaa dagatamaa deema. Ammaan durayyuu magalaalee kanneen armaan olitti ibse keessatti Afaan Oromoo guddinni isaa sadarkaa dubbiitti (Speaaking in public) hudhamee jira. Yeroo ammaa kanattis ta’e gara fuulduraatti, yaadniifi qabeenyi Oromoon (Human and Natural resources) qabu Afaan Oromoo sadarkaa isaaf malu irra geessisuudha malee akka Afaan kun Afaan biraan guddinni isaa ukkaamfamu ykn hudhamuuf carraa xiqqooshee sirna Gabroomfataa kamiifuu eeyyamuu hin qabu. Sadarkaan Afaan Oromootiif malu ammoo; Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Fedearaalaa gochuu, Waajjira Mootummaa Federaalaa mara/cufa keessatti Afaan hojii gochuudha. Adeemsa ittiin Afaan Hojii ta’u bu’uura seeraatiin malee, Paartiin tokko ammuma akka nama hirriba keessaa dammaqee ka’ee Afaan hojii paartii gooneerra jedhu miti. Deebiin Oromoo ija seeraan ilaalee Mammaaksa kana gadii itti mammaakuu qaba. Innis “Ya Marqaa si afuufuun si liqimsuufi.” Kan jedhu dha. Isa kana paartiituu murteessaaf osoo hin taane, Adeemsa diimokraasiitiin bu’uura seeraa eeggatee karaa Uummatni Oromoo bakka buufateen malee, Kara deemaan dhufee anatu siif kenna jechuu hin danda’u. Mirgi gaafatamee fudhatama malee kadhaan kan argamu miti (You claim your right). Yookiis, gaaffii mirgaa ati gaafattu namni akka badhaasaa godhee siif kennee, bor ammo, aangoo isaa kan ittiin sirratti cimsatu ykn beekamtii isaa kan ittiiin olkaafatu (Selling his own goodwill or self-promotion) gonkumaa ta’uu hin qabu.
This propensity (Amharic as a second language in Oromia) will enviably pushes the Oromo language to the margin and completely chokes its growth. PP’s language policy is a colonial (of Neftanga) as a perfidious move towards the Oromo language, preservation of the Oromo identity and history. Thus, any Oromo shall fight against it at in spite of all costs by any means necessary to foil its genocidal plan (Culturally Speaking) in Oromia region.
B) Mirga Ofiin Of Bulchuu Mulqa/ Barge in on Regions Self-Autonomy
Heerri Mootummaa Federaalaa Ripabilika Itoophiyaa, Keeyyata 39(1) Sabaaaf, sablammiin fi Ummattootni Itoophiyaa martinuu mirga ofiin of bulchuu, hanga fottoquu haalaan hin daangofne qabu jedha (translation is mine). Hiikkaan Afaan Inglizii isaa akkas jedha “Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has an unconditional right to self-determination, including the right to secession.”
Ofiin of bulchuu yeroo jedhu, Waa’ee Afaan kee, Aadaafi Leecalloo naannoo kee keessa jiruu fi Saba lafa kee irra jiraatu irratti situ murteessaa jechuudha. Caalaatti ammo Seerri Mirga namoomaa Idil-addunyaa Itoophiyaan raggaasifte waa’ee Mirga siiviiliifi Siyaasaa (Civil and Political rights) Keeyyata 1 akkas jedha. “All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.”
Kun jechuun hiree ofii murteeffaachuu, uummata kan aangomsuufi gara guddina aadaa, dinagdee fi hawaasummaatti kan geessu ta’uu isaa kan ibsu dha. Dabalees, heerri Mootummaa FDRI Keeyyata 5(1) Afaan Ingliiziin akkas jedha “All Ethiopian languages shall enjoy equal state recognition.” Afaan Itoophiyaa marti seeraan mootummaa biratti wal-qixa beekamtii qabu jedha. Sadarkaa yaadaatti (Theory) Afaan biyya sana keessa jirtu hunduuu walqixa ilaalamu jedha. Dhugaan lafarra jirtu garuu kana hin ibsu. Sababni isaa Afaan Amaariffaa itti yaadamee akka afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta’u yeroo godhame, Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa akka hin taane wanti dhorku hin turre. Garuu, Oromoon yeroo sana dhageettii hangamii qaba waan jedhus tilmaamuun nama hin dhibu. Afaan Amaariffaa yeroo sanatti abbaa humna qabuun kan filamedha, malee mootummaan gad bu’ee fedhii ummattoota Itoophiyaa gaafatee miti. Caalaatti ammoo waa’ee ofiin ofbulchuu, Heera Mootummaa FDRI Keeyyata 5(3) yeroo ilaallu Afaan Inglizii akkas jedha “Members of the Federation may by law determine their respective working languages.” Miseensonni Federeeshinii seeraan Afaan hojii isaanii murteeffachuu danda’u jedha. Bu’uura kana irraa ka’uudhaan BMNO Afaan Naannoo isaatii Afaan Oromoo godhee Heeraa Mootummaa Naannoo Oromiyaatiin tumee lafa kaa’eera. Egaa yeroo Paartiin Bilxiginnaa Afaan hojii dabalataa Naannoo Oromiyaa Afaan Amaariffaa godhee dhiyeessu, ija seeraa fi heeraatiin yommuu ilaallu bu’uura Ofiin of bulchuu (Sef-determination) heera Mootummaa Federaalaan tumame ifaa fi ifatti kan cabsudha. Yoo BMNO tole jedhee kan fudhatu yoo taate illee,karaa Paartii osoo hin taane, karaa seera qabeessaan Caffeen Oromiyaa heera dur ture fooyyessee Afaan Naannichaa Afaan lama akka ta’u gochuu danda’a. Kanaan achi, Aangoo Caffee BMNO ala waan Ummatni Oromoo hin feene irratti fe’uun oftuulummaa fi ilaalcha sirna Nafxanyaa irraa kan burqe dha.
Hawaasa dimookraatawaa fi bilisa (In a Free and Democratic society) keessatti aadaa, Afaanii fi himaammata dinagdee dabalatee yoo kan koon ta’e malee biyyi kun hin guddattu waan jedhu hin jiru ykn hin hojjetu. Hiree ofii abbaatu bilisa ta’ee murteeffata (Freely determine) jechuudha. Uummataaf dursa kennaanii waan uummatni barbaadu gaafatanii dantaa saba sanaa waan giddugaleessa godhate murteessu malee hiree ofiin murteeffanaa saba tokkoo moggaatti dhiibanii waan inni hin barbaadne irratti fe’uun amala oftuulummaa fi amala sirna nafxaanyaati. Kun ammo ija seeraatiin, mirga namoomaa ofiin of bulchuu Heeraa Mootummaa Itoophiyaa fi Seerawwan Idil-Addunyaa waa’ee mirgoota namoomaa dubbatan ifatti kan faallessu fi cabsudha. Kanaaf, Uummatni mirga ofiin of bulchuu erga qabaatee (Theoretically speaking), waan Naannoo isaa keessatti ta’uu qabu/malu, waa’ee aadaa, afaaniifi jireenya hawaasummaa isaa bifa dimookiraatawaa ta’een bilisa ta’ee murteeffachuu qaba. Kun yoo ta’uu baate, uummatni kun ofiin of bulchaa hin jiruu jechuudha. Uammatni ofiin of hin bulchine ammoo yeroo hundumaa bilisumaan isaa sarbamaadha.
Sabni tokko mirga Afaan isaatiin dubbachuu, barreessuu, guddisuufi ibsuu akkasumas aadaa isaa dagaagsuu fi seenaa isaa tursuu akka qabu Heera MFDRI Keeyyata 39(2) afaan Ingliziin akka armaan gadiitti kaa’eera: “Every Nation, Nationality and People in Ethiopia has the right to speak, to write and to develop its own language; to express, to develop and to promote its culture; and to preserve its history.” Yeroo Oromoon Afaan koo afaan hojii mootummaa federaalaa haa ta’u jedhu; afaan isaa akka guddatu mirga gaafaachuu jalatti kufuu danda’a. Kanaaf, guddina afaan ofii gaafachuu ammoo mirga heeraan kabajame dha. Mootummaan ammoo hojiin isaa inni jalqabaa mirga lammiilee tiksuufi kabajuudha. Yoo heeraafi seera ofiin tumanii itti hin bulan ta’e, abbaa irrummaa olaantummaa seeraa (rule of law) hin fudhanne jechuudha. Olaantummaan seeraa hin jiru jechuun ammoo, bu’eerri/qajeelfamni diimokraasii (Principles of democracy) bade jechuu dha.
C) Aadaafi Seenaa Oromoon Waggaa Soddoomaaf Afaan Kanaan Deebisee Ijaare Diiga/It Threatens The Culture and History of Oromo built so far
Kana yommuun jedhu, ija siyaasaatiin waan uummatni Oromoo afaan isaa guddisuufi seeraan tumee afaan hojii fi barnootaa godhee kaa’e gara jijjiiruu ykn fooyyesuutti deema jechuudha. Osoo seerri dhorkuu Oromiyaa keessatti afaan Oromo moggaatti baasanii afaan Amaarrifaatiin kan barbsiisaa turan dhuma hin qaban. Barreeffamoota baayyee Magaalaa Oromiyaa keessatti argaman kan akka Baankii, Teelee fi Dhaabbata Feeraalaa kan ta’an barjaan isaanii hanga jijjiirama dhiyeenya dhufe kanatti Afaan Amaariffaan kan barraa’aniifi Dogoggora Qubee illee fooyyessuuf dantaa kan hin qabne turan. Yeroo Amaariffi ammoo akka jarri (PP)n jedhanitti yoo Afaan hojii BMNO ta’e, abjuudha malee, osoo torban hin guutiin Afaan Oromoo Magaalaa gurguddaa Oromiyaa keessaa baasa, yoo xiqqaate sadarkaa duubbii fi tajaajila waajjira tokko tokkotti. Kun aadaa, seenaa Oromoon deebisee ijaaraa jiru kan guffachiisudha. Guddinaa seenaafi aadaa Oromoo daandii gaarii irra jiru kan hudhee quucarsee hambisudha. Akka Oromoo tokkootti afaan Oromoo Magaalaa fi Baadiyyaa Oromiyaa keessatti wal qixa illee yoo dubbatamuu baate, kabajamuu akka qabuttan amana. Afaan Oromoo sadarkaa magaalaa xixiqqaa Oromiyaan qabdutti daanga’ee hafuu hin qabu. Kanaaf, Afaan amma dabalataan dhufu Afaan Oromoo waggaa soddoma (30) as awwaala gabrummaa diigee ka’e, reefuu daandii guddinaa eegale biratti Afaan gabroomfataa dabaluu yaaluun/yaaduun, waan hanga ammaatti uummanni Oromoo ijaarrate duubatti deebisuu fi dadhabsiisuuf kan karoorfamedha. Oromiyaan imaammata Afaan tokkoon geggeeffamuu kana dirqama waan hordofuu qabdu ta’a.
Certainly, for me Mono-lingual approach is the only way out for the Oromia regional state to preserve its history, promote its culture, and embolden its identity. The new culture and history that has been built through the hard work of Oromo people for more than two decades will not go in vain brusquely.
D) Sabboonummaa Oromoo Laamshessa/ It Paralyses Oromo Nationalism
Sabboonummaan Oromoo kan irratti bu’uurreffate Afaan, aadaafi eenyummaa Waaqayyo/Uumaan namaaf keenneen boonuu fi itti qaanfachu dhiisuu akka ta’e ifaadha. Kun yaadaa fi ilaacha mataa kootiin yoon hiikuu/ibsu dha. Sabboonumaa ofii abbaatu kunumfatee guddisa. Egaa yeroo sabboonummaan kee sarbamu (imaammataafi seeraan diibamu) mirga uumaan siif kenne kan akka aadaa kee fi afaan keen boonu kana sirraa mulqa jechuu dha. Ammas imaammata paartii PP yoo ilaallu, kaayyoon isaa Amaariffa afaan dabalataa godhaanii dhiyeessuun sabboonummaa Oromoo dhiibbaa gabroomfataa damdammatee har’a ga’e laamshessuudha. Balaafi kisaaraa guddaa Afaanii fi aadaa Oromoo akkasumas eenyummaa Oromoo irraan ga’uuf malee bu’aa inni Oromoof fidee dhufu tokko illee hin jru.
Sabboonummaan Oromoo salphaatti guddatee sadarkaa har’aa/ammaa kana irra ga’e miti. Oromoon sabboonummaa isaaf jecha hidhamaa, ajjeefamaa, jibbamaa, hacuucamaa, hojii irraa ari’atamaa akkasumas biyya abbaa isaa gadi dhiisee akka baqatu ta’ee jira. Ammas taanaan sababa Eenyummaa isaan boonuuf jireenya maraammartoo (vicious circle) jiraataa jira. Aggaammii Sabboonummaa Oromoo laamshessuu kallattiidhaan Oromummaa fi eenyummaa Oromoo balleessuuf kan dhufedha. Kanaaf, Oromoon sabboonummaa isaa caalaatti tiksuufi kunumsuu qaban jedha. Adeemsa ifaa fi seeraan sirna qabsiisee sabboonummaa akka mirga dhala namaatti eegsisuu fi dagaagsuu irratti illee shoorri BMNOn taphatamuu qaba. Kun, ammoo dirqama oromummaa fi itti gafatama seenaa fi seeraa Caffeen Oromiya ba’achuu qabudha. Akkas taanaan sabboonummaa Oromoo bu’uura seeraa jabaataa (Solid legal foundation) tokko irra dhaabuu dandeenya.
Afaan Oromoo Afaan hojii mootummaa federaalaa ta’uuf ulaagaa guutee kan irraa hafu dha. Yaada Hanqinni Baajataa, Afaan Oromoo Afaan hojiin gochuu hin maluuf,Tokkummaa biyyaa balaa irra buusa fi Sodaa baayyina Oromoo hojii argachuu sadarkaa federaalaatti jedhetu jira osoo hin taane, kan ifee mula’atu hanqina yaadaa fi rakkoo ykn dogoggora ilaalcha (Summii tokkummaa Itoophiyaa keessa jiru) sirna nafxanyaa jaarraa takkoo oliif lafa qabate dha. Uummanni Oromoo cichoominaan mirga isaa gaafachuu seeraa fi heera bu’uureffatee itti adeemuun dirqama jiraachuu fi jiraachuu dhiisuuti. Nafxanyaa fi fakkaattonni isaanii seenaa, aadaa, afaanii fi eenyummaa Oromoo xiqqeessuuf yeroo isaan itti ciisanii bulan hin jiru. Humna qabanii fi carraa qaban hundumaatti fayyadamuun saba kana xiqqeessuu irratti hojjetu. Barruun armaan olii kunis yaaduma kana ibsa. Yaadoleen kunis maddi isaanii ilaalchuma kanadha. Rakkoon bu’uuraa isaan qaban garuu sodaa saba kanaati malee dhugummaan isaa waan isaan jedhan kana miti. Afaan Oromoo afaan hojii mootummaa Fadaraalaa yoo ta’e sabni kun kana caalaa fayyadama, dhugaa isaatu ifa ba’a, akkasumas waan gaarii inni qabutu addunyaa biratti beekama jedhanii akka ta’e hubachuun ni danda’ama. Abbaa Baahiree irraa eegalee hanga ammaatti waan barreessitoonni isaanii hojjetan faallaa saba kanaati. Yoo jibbinsi fi tuffiin Afaan Oromoof qaban hin dhaabbanne akkasumas Afaan Oromoo akka Afaan Itoophiyaatti hin fudhatamne garuu; biyyi sun afaan qawwee hanga har’aatti humnaan tokkummaa ishee tikse/eege cabsee kan ba’u ta’uun isaa dhimma yeroon achii as deemtu nutti himtu dha.
Gabaabummatti, yaada xumuraa Afaan Ingiliziiitiin cuunfee akka armaan gadiitti dhiyeesseera.
Opposing PP’s Language policy for Oromo is not a choice for it is a question of survival, preservation of our own identity and history entrenched on a new system at the Oromiya regional state for the last three decades. As an Oromo nation we had endured myriad defies and survived all the naftenya’s system of annihilation against our culture, dignity, identity, language and property (Land) in all its forms. Today, the Oromo people can clearly identify what is good and evil for its existence as a nation at this age of QEERROO and QARREEs’ avant-gardism. Any political system or ideology which dares to reverse or deracinate what has been built by Oromo people in the last three decades will never make it.
The need for establishing a culture of democracy and democratic institutions via a constitutional order at every level of administration is not a choice for the Ethiopian government. A notion of democracy is the rule of people by people where the legitimacy of the ruler is derived from the populace. Given the veracities on the ground, the current Ethiopian government is becoming tyrannical and assiduously working against the rudimentary tenets of democracy. Vicissitudes in Ethiopian politics is also taking a wrong turn. The moment the government fails to listen to the voices of the horde and does anything by disregarding their demand for freedom and democracy, that is the moment democracy starts dying. The contrary is also true.
The current transition (Opposition parties or Activists’ naming) in Ethiopian politics is achieved through unimaginable human loss and property damages to a human kind (Largely for the Oromo People). It (transition) was also hoped by many as assurance to efficacious transition to democracy. However, the ruling government’s wishy washy have never dispensed those profound grumbles of the Oromo peoples and their quest for substantive and formal equality and their right place in the Ethiopian politics that had been dominated by minority tyranny for centuries.
EPRDF’s coalition parties merger and formation of a brand new party (Prosperity Party) with its language policy (Plan to uphold Neftenya’s colonial rule) is a stark illustration of a colossal attack on Oromo language, culture, self-autonomy and multicultural federation at large. This gives PP (the Unionist camp) a symbolic victory over the federalists. This kind of attack on the constitutionally entrenched language policy is a clear depiction of anarchy on the rise and a blatant subversion of constitutional order by force. The Oromo people are legally (by both the Federal and Oromia regional state Constitution) entitled to bring a legal action againt the PP’s move towards the Oromia region for its (PP) act is devoid of any legitimacy and encroaching up on the regions right to self-government.
On top of that, the daunting story of disappearance and loss of life with no accountability from the government side is a treacherous signs that it is leading to a complete lawlessness. The absence of proper investigation and prosecution of suspected criminals; makes the Ethiopian government more of an accomplice rather than a guardian of human rights. This aspect of governance and obtuse justice delivery will also entirely erodes the hope for a thriving democracy and rebuff Ethiopia as an evolving democracy. What will be the primary responsibility of the government other than ensuring the safety and security of its own citizens? NONE!
Amsalu Darge Mayessa(Human Rights Lawyer, he can be reached @ yedrageamsal@gmail.com)
● International Convenant on Civil and Political Rights, Adopted, March 1976.
● The Constitution of the FDRE, 1995.
● International Covenant on Social, Economic and Cultural Rights, Adopted, March 1996.
Previous articleAlgeria, Ethiopia Experience Worst Internet Shutdowns in Africa
Next articleFree pauper than a rich slave